Guryo kala duwan | Samfunnskunnskap.no
Norwey waxa ku yaala guryo ka badan labo milyan oo guri. Kala badh guryuhu waa fiilooyin. Magaalooyinka waaweyn, sida oslo boqolkiiba 70 guryuhu waa dabaqyo iyo nooc loo yaqaano bygårder. Degmooyinka yaryar boqolkiiba 90 waxey noqon karaan fiilooyin. Qiyaastii afar meelood meel ahaan dadku waxey ku noolyihiin guryo kiro ah ama ijaar ah, inta soo hadheyna iyaga ayaa iska leh guryaha ay ku nool yihiin.
Waxa jira laba nooc oo guryaha loo yeesho. Mid waa inuu qofku isagu iska leeyahey guriga, ka kalena waa inuu guriga la leeyahey iskaashatooyinka guryaha ama shirkadaha saamileyda ah.
Badanaa dhammaan guryaha ku yaala Norwey waxey leeyiihiin musqulo iyo kijin u gaar ah.
Ma ogtahey in …
Si loo kululeeyo guriga in ay caadi tahay in la isticmaalo koronto. In ka badan boqolkiiba 90 ka mid ah guryuhu waxa ay isticmaalaan koronto si loo kululeeyo. Qaybina waxa ay iticmaalaan xaabo ama shidaal.
Qiyaastii saddex-dalool ka mid ah kharashka ka baxa qoys-guriga noorwiijanku waxay ku baxaan kharash guri, halka se ay qoys dhexdhexaad ahi ku isticmaalo cunto boqolkiiba toban iyo kow miisaaniyada.